मंगलबारको भूकम्पले काठमाडौँका कुन-कुन ठाउँमा घर भत्कियो? – Gulmiews
मंगलबारको भूकम्पले काठमाडौँका कुन-कुन ठाउँमा घर भत्कियो?
३० बैशाख २०७२, बुधबार ०५:२५ Sanju Kauchha
No comments	काठमाडौँ, बैशाख २९ । आजको भूकम्पका कारण काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा थप घर भत्किएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी आवागमनमा असहज भएको छ ।
यसअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट चर्किएर खतराको चिन्ह (रातो) मा रहेको सामाखुशी चोक नजिकका माइला सुनुवार (कृष्णनन्द) को छ तले घर भत्किँदा सँगैको साइबर पसलमा क्षति भएको छ । साइबरमा एक बच्चा परेको आशंकामा तीनवटै सुरक्षा निकायका साथै अमेरिकी सेनाको टोलीले उद्धार गरिरहेका छन् । नयाँ बजारको पिपल्स डेन्टल अस्पतालमा पनि थप क्षति पुगेको छ ।
अस्पतालका चिकित्सक डा दीपक श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालभित्र रहेर सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । नयाँ बजारको मुख्य सडकमा रहेको एक घर भत्कँदा सो क्षेत्रको सवारी आवागमनमा समेत बाधा पुगेको थियो । नयाँ बसपार्कस्थित मित्रनगरमा यसअघि चर्किएका घर भत्किएको र ढल्किएको तथा टेलिफोनका लाइन अवरुद्ध भएको स्थानीय आदर्श श्रेष्ठले जानकारी दिए।
गोंगबु क्षेत्रमा करिब छ ठूला होटल तथा घरहरु भत्किएका छन् भने दर्जनौं घर भासिएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल हिमालयन बैंक बसेको भवन पूरै चर्किइ खतराको स्थितिमा छ । कपन नीलोपुलस्थित ईन्द्र श्रेष्ठको पाँचतले घर पनि भासिई केही भाग सडकमा खसेको छ । जैसीदेवल न्हुघः टोलमा एक घर भत्किए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन । ओमबहाल टोलमा चर्किएका केही घरहरु भत्किएका छन् । असनमा गणेश मन्दिर पछाडिको एक घर भत्किएको छ । साँखु क्षेत्रमा थप घरहरु भत्किएका छन् र त्यहाँ करिब १२ जना घाइते भएको बताइएको छ । त्यस्तै ललितपुर बुङमतीमा पनि पुराना केही घरहरु भत्किएका छन् । रासस Comments comments	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	दलित समुदायबाट सिडियो बनेका बिश्वकर्मा अमेरिकामा सम्मानित